Ireo mpitrandraka Chia dia mitsambikina an-dranomasina ary mivarotra ny zava-drehetra | Avy amin'ny Linux
Herinandro maromaro lasa izay tazo vaovao cryptocurrency nanomboka niely tamin'ny tambajotra, indrindra fa ny iray izay manana toky ekolojika, ny cryptocurrency Chia, saingy notsikeraina mafy izany tato anatin'ny volana vitsivitsy ary nilatsaka be ny sandany tao anatin'izay herinandro lasa izay satria nanomboka nandao ny cryptocurrency ireo mpitrandraka.
Ary izany tokoa Nandritra ny herinandro lasa teo, mpitrandraka maro no nanomboka namidy indray ny fitaovany, kapila mafy nohavaozina ny kapila mafy. Mandany ny SSD efa niasa ho an'ny vaovao izy ireo ary amidiny izy ireo, nanomboka Chia dia manimba ny SSD, fotoana fohy fotsiny vao manomboka tsy mahomby ireo kapila "vaovao" ireo.
Chia no fototry ny vola crypto chia karazana bitcoin. Miorina amin'ny blockchain misy ifandraisany amin'ny rafitra matematika mifototra amin'ny fitsapana ny fananana habaka kapila mandritra ny fotoana iray.
Voalaza fa tsy mitaky be loatra amin'ny famatsiana herinaratra noho ny bitcoin, izay miorina amin'ny porofon'ny asa ary mitaky fanodinana CPU be dia be. Tsotra ny foto-kevitr'i Chia: rehefa misandoka sakana ny sakana, dia miparitaka any amin'ny valan-tserasera. Rehefa mahita ny iray amin'ireo sakana ireo ny mpitrandraka iray dia avoakany amin'ny sisa amin'ny tamba-jotra izany ary ny hafa kosa manome ny porofo malalaka toerana.
Izany hoe, ny tahiry azon'izy ireo omena amin'ny tambajotra, ny telo tsara indrindra dia ampitaina amin'ny tamba-jotra, ary ny iray amin'ireo "mpizara fotoana" ao anatiny dia manamafy ny fotoana nanomezana ny fitsapana ary noho izany dia manamarina ny sakana vaovao.
Ny hevitra dia ny tsirairay dia manana toerana fitahirizana maimaim-poana izay azo ampiasaina hanamarinana ireo fifanakalozana ireo nefa tsy miteraka fandaniana fanampiny amin'ny fanjifana. Hatramin'ny nanombohan'ny Chia, ny cryptocurrency vaovao dia nahatonga fiovana vitsivitsy teo amin'ny tsenan'ny kapila mafy. Araka ny filazan'ny orinasan'ny fikarohana Context dia natanjaka be izy io ary nanjary tsy fahampiana kapila mafy.
Tamin'ny volana Jona, nitaterana fa ambany 200.000 monja eo amin'ireo ivon-toerana fitehirizam-bokatra akaiky indrindra misy 10 TB no ho miakatra no namidy tamin'ny mpampiasa farany tany Eropa nandritra ny volana aprily, izay nitombo ny 240% raha ampitahaina tamin'io volana io ihany tamin'ny taona 2020.
Mandritra izany fotoana izany, ny kapila mafy NAS ho an'ny mpanjifa dia nivarotra kapila 250.000 teo ho eo, fitomboan'ny 167% isan-taona.
Fampiasana ny teknika fitsapana-amin'ny-habaka na test-of-capacité (PoC) mila toerana fitehirizana goavambe izany, ary ny soritr'i Chia dia mety hanimba ny SSD maoderina afaka herinandro.
Araka ny tatitra iray avy amin'ny VNExpress, mampiasa SSD hitrandrahana vola crypto mandoa hetra izaitsizy amin'ny drive izy ohatra amin'ny ohatra iray ny 1TB SSD ampiasaina hanangonana an'i Chia ihany haharitra 80 andro eo izany raha ampitahaina amin'ny fampiasana 10 kapila amin'ny tranga hafa.
Ary koa, ny antony ara-tontolo iainana an'i Chia dia be fanontaniana tato ho ato, ary ny sombin'i Chia dia tsy raisina ho toy ny safidy ekolojika intsony. Nanomboka tamin'izay, ny cryptocurrency dia nianjera tamin'ny fiakarana kely $ 1,685 teo amin'ny telo volana lasa izay ka lasa $ 249 fotsiny.
Raha ny marina, taorian'ny nanombohany tamin'ny volana Mey, dia nahatratra $ 1,685 ny vidin'i Chia ary nidina hatramin'ny $ 212 tamin'ny faran'ny volana aogositra 2021, izay mitontaly nilatsaka mihoatra ny 85% ny sandan'ny Mey. Midika izany fa ny fitaovana nampiasain'izy ireo hanalana chia dia tsy maintsy amidy.
Amin'ny tranga sasany, Ireo mpitrandraka taloha an'i Chia dia mivarotra ny SSD nampiasainy mody vaovao izy ireo. Mety hiteraka fahadisoam-panantenana izany, satria manantena firaketana vaovao haharitra mandritra ny taona maro fa tsy amam-bolana.
Midika izany fa hamidin'izy ireo ambanin'ny sandan'ny tsena izy ireo, satria ny fanarahan-dia an'i Chia dia mety hanimba ny SSD antonony ao anatin'ny roa volana, miampy ny filazana fa ireo kapila ampiasaina izay novidiana betsaka dia nohavaozina. Ary amidy toy ny vaovao izy ireo, izay ilana izany. disk dia mbola avo be. Ka mety fotoana fohy fotsiny angamba vao avoaka amin'ireo tsena hafa toa ireo Asia sisa, Eropa, ary Etazonia ireo SSD nohavaozina ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ireo mpitrandraka Chia dia mitsambikina an-dranomasina ary amidiny ny zava-drehetra